कस्तो रह्यो २०७७ साल ? :: जयपृथ्वी डेली :: JpDaily
कस्तो रह्यो २०७७ साल ? कोरोना कहर र राजनीतिक उथलपुथल
विक्रम संवत २०७७ साललाई नेपालीहरूले बिदा गर्न लागेका छन्।
कोरोना कहर र त्यसले पारेका चौतर्फी असरका कारण देश, प्रदेश तथा विदेशमा छरिएका धेरै नेपालीको मनमा ७७ सालले राम्रो छाप छोडेको छैन। तर ७७ साललाई फर्किएर हेर्दा कोरोना कहर र त्यसले पारेका चौतर्फी असर नेपालीहरूको मानसपटलमा अझै ताजा छ।
कोरोना कहरकै बेला देश र प्रदेशमा राजनीतिक उथलपुथलसमेत हुन गए जसको प्रकम्पन अझै चल्दैछ।
नयाँ वर्ष २०७८ मा पनि कोरोना महामारीले पारेको असर सहजै हट्ने लक्षण छैन।
रोजगारीको अवसान र पैदल यात्रा
२०७७ साल सुदूरश्चिमका लागि समेत उत्साहजनक वर्ष रहेन। वर्षको सुरुवातमै कोरोनाको कारण देशव्यापी लकडाउन हुँदा त्यसको प्रभाव सुदूरपश्चिमको जनजीवन, आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीमा पऱ्यो। कोरोनाको कारण लकडाउन र सीमानाका नाकाबन्द गरिँदा रोजगारीको लागि नेपाल र भारतको विभिन्न ठाउँमा रहेका सुदूरपश्चिमवासीले हप्तौँ पैदल हिँडेर या भारतीय भूमिमा कष्टपूर्ण क्वारेन्टिनमा महिना दिनसम्म बस्नुपर्ने अवस्था आयो।
स्वदेश फर्किन आन्दोलन
२०७७ को सुरुवातमै कोरोनाभाइरसको त्रासदी र लकडाउनका कारण सुदूरपश्चिमका हजारौँ नागरिक बेरोजगार भएर घर फर्किन बाध्य हुनुपऱ्यो। जसको कारण लकडाउनमा सुदूरपश्चिमवासीले हातमुख जोड्न समेत कठिन भएको अवस्थाको सामना गर्नुपऱ्यो। २०७७ सालमै सुदूरपश्चिमवासीले स्वदेश फर्किन पहिलो पटक भारतीय भूमिमा बसेर आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा थोरै सुधार
२०७७ सालमा कोरोनाभाइरसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ जनाको मृत्यु भयो भने, १४ हजार २ सय ९ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण पुस्टि भयो। कोरोनाको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा भने केहि प्रगति भएको मान्न सकिन्छ। वर्षको सुरुवातीमा कोरोना परीक्षण गर्न नेपालगञ्ज या काठमाण्डौँ नमुना पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो भने, अहिले प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पताल सहित कञ्चनपुरको महाकाली अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, बैतडी, बझाङ, अछाम र डोटी अस्पताल गरी आठ ओटा स्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्थापना हुन पुगेको छ।
स्वास्थ्य संकटका बेला तीनै तहको सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्न भने केहि हदसम्म २०७७ साललाई श्रेय दिन सकिन्छ। तथापि कोरोनाको कहरमा समेत राहत वितरण र उद्धारमा आर्थिक अनियमितताका घटना भएको खुलासा समेत भयो। तर २०७७ सालले आम मानिसमा स्वास्थ्य सचेतनाको विकास भएको स्वास्थ्य अधिकारीले दाबी गरेका छन्।
वन डढेलो र वायु प्रदूषण उत्कर्षमा
प्रदेशले स्वास्थ्य संकट खेपेको यो वर्षमा वातावरणीय समस्या समेत विकराल देखिए। लामो समयसम्म प्रदेशभर सुख्खा खडेरीका कारण १ लाख हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोको चपेटामा परेको वन अधिकारीले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २०७७ को अन्तिम दुई महिनामा वायु प्रदूषणको अवस्था झनै विकराल रह्यो। धनगढीको वायु प्रदूषण सूचकांक फागुन र चैत महिनामा देशभरमै सबैभन्दा बढी ४ सय भन्दामाथि पुग्यो।
चरम राजनीतिक खिचातानी
राजनीतिक अस्थिरताको वर्षको रुपमा समेत २०७७ साललाई लिन सकिन्छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत राजनीतिक ध्रुविकरण चुलियो। राजनीतिक विमतिका कारण प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गरेभने आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहराले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिए। यसरी केन्द्रिय राजनीतिको असर प्रदेशको राजनीतिमा समेत परेको देखियो। कोरोनाको कहरकाबिच सरकार विरुद्ध गरिएको आन्दोलनमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले समेत प्रदर्शन गरेको देख्न पाइयो। पुष ५ पछि कोरोनालाई बिर्साउने गरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुले प्रदेशभर भेला, आमसभा र जुलुस निकाल्ने कुरामा निरन्तरता दिइरहे।
२०७७ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशवासीका लागि अपराधका घटनाको कारण समेत सुखद रहेन। गत माघ २१ गते बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको विद्यालयबाट घर फर्किदा बलात्कार पछि हत्या गरियो भने बझाङको मष्टा गाउँपालिका २ की १३ वर्षीया बालिका सम्झना विकको समेत बलात्कारपछि हत्या गरियो। यसैगरि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बालिका तथा महिलामाथि बलात्कार तथा हत्याका घटना सार्वजनिक भइरहे। २०७७ सालमा व्यक्ति हत्याका घटना पनि हरेक महिना भइरहे।
शिक्षाका लागि कालो वर्ष
२०७७ साल विद्यालय र विद्यार्थीका लागि पनि सुखद रहेन। शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै भएको लकडाउनले विद्यार्थीको पढाइ मंसिर महिनासम्म नै अवरुद्ध हुनपुग्यो भने त्यसपछि पनि डराएर स्कूल कलेज जानुपर्ने अवस्थामा सुधार हुन सकेन। यो वर्ष एसईईको परीक्षा हुन सकेन भने, विद्यालय उमेरका बालबालिकासमेत कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुन पुगे। शैक्षिक सत्र ढिलो गरी सुरु हुँदा सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले पनि यो वर्ष सुखद रहेन।
सडक दुर्घटनाको कारण समेत २०७७ मा धेरै प्रदेशवासीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। वर्षभरी ५ सयको हाराहारीमा भएका ठूला साना सडक दुर्घटनामा डेढ सयबढीले ज्यान गुमाए भने ५ सयबढी गम्भीर घाइते हुन पुगेको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ। प्रदेशमा हत्या, अपहरण, लुटपाट र आगलागी र बाढी पहिरोको घटनाले २०७७ सालमा नबिर्साउने छाप छोडेर गएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत ३१, २०७७ २१:३५